प्रचण्डलाई बाबुरामको प्रश्न- तपाईं डुप्लिकेट कम्युनिष्ट हो ? ‘मदन र म सानैमा छुट्टएिका एउटै आमाका सन्तान पनि भन्ने हो कि ?’ – Online Annapurna
प्रचण्डलाई बाबुरामको प्रश्न- तपाईं डुप्लिकेट कम्युनिष्ट हो ? ‘मदन र म सानैमा छुट्टएिका एउटै आमाका सन्तान पनि भन्ने हो कि ?’
९ कार्तिक २०७६, शनिबार ०५:४८ October 26, 2019 280 Views
‘मदन र म सानैमा छुट्टएिका एउटै आमाका सन्तान पनि भन्ने हो कि ?’
९ कात्तिक, काठमाडौं-समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डलाई ओरिजनल माओवादी नभए डुप्लीकेट माओवादी हो ? भनेर प्रश्न गरेका छन् । उनले प्रचण्डको ओरिजिनल र डुप्लिकेट अवतार कसरी चिन्ने ? भनेर पनि प्रश्न गरेका छन् ।
डा. भट्टराईले प्रचण्डलाई कडा कटाक्ष गर्दै मदन र म सानैमा छुट्टएिका एउटै आमाका सन्तान पनि भन्ने हो कि ? भनेर पनि प्रश्न गरेका छन् । भट्टराईले लेखेका छन्, ‘आफूलाई चौमको मदन भण्डारी पनि भन्न भ्याउनुभएछ । पछि मदन र म सानैमा छुट्टएिका एउटै आमाका सन्तान पनि भन्ने हो कि ? यसरी माछा देखे भित्र हात, सर्प भए बाहिर हात कहिलेसम्म ?photo/story www.onlinekhabar.com /